Faah-faahinta Heshiiska Arsenal La Gaadhay Difaaca Ay Ku Garaacday Manchester United & Napoli - Gool24.Net
Faah-faahinta Heshiiska Arsenal La Gaadhay Difaaca Ay Ku Garaacday Manchester United & Napoli
Arsenal ayaa la sheegay in tijaabada caafimaadka uu u maray difaaca reer Brazil ee Gabriel Magalhaes oo ka tirsan kooxda Lyon, isla markaana ay labada kooxood ka heshiiyeen qiimihiisa markii ay Gunners sare u qaadday kordhisay lacagta ay ku doonayso.
22 jirkan oo sidoo kale ay raadinayeen Manchester United iyo Napoli ayay Arsenal hore u qaadday tallaabo ay kaga lud horreysay labada kooxood ee kale, isla markaana u suurtogeliyey Mikel Arteta inuu helo adeegga ciyaareed ee laacibkan aadka loo qiimeeyo.
Arsenal ayaa xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday ay ka muuqatay sida ay baaba’a uga yihiin khadka dambe ee difaaca, waxaana laga dhaliyey 48 gool 38kii ciyaarood ee ay dheeleen, taas oo ka dhigan in ciyaar walba laga dhalinayey wax ka badan hal gool.
Tababare Mikel Arteta ayaa aad ugu rajo weyn in kooxda uu ka dhiso meelaha ay ka liidato oo ay ugu horreyso khadka dambe ee difaaca oo uu u qorshaynayo inuu xalka ugu horreeya u noqdo Gabriel Magalhaes.
Sida uu bartiisa Twitterka ku qoray wariyaha Sky Sports ee Fabrizio Romano oo wax badan ka og suuqa kala iibsiga, Arsenal waxay xoogaa sare u qaadday lacagtii ay markii hore ku doonaysay laacibkan, taas oo Gunners ka caawisay inay saxeexa 22 jirkan ku garaacaan Manchester United, Napoli iyo kooxihii kale ee hungurigu kaga jiray.
Gabriel ayaa qaab ciyaareed wanaagsan kusoo bandhigay kooxda Ligue 1 Xilli ciyaareedkii dhamaaday inkastoo uu u saftay 52 kulan kooxda hadana Daafacan ayaa lagu tiriyaa mid kamid ah daafacyada ugu wanaagsan horyaalka France.
Iyada oo William Saliba uu ka soo laabanayo amaahdii uu kaga maqnaa Emirates xilli ciyaareedkii hore, haddii Arsenal ay la soo saxiixato Gabriel taasi waxay siin kartaa wada shaqeyn muddo dheer ay sugeysay ee daafaca dhexe halka ay sii joogaan David Luiz iyo Sokratis oo ah khabiiriinta horyaalka Premier League.
Isagoo kooxda u qaaday FA Cup xilli ciyaareedkii dhamaaday, Arteta wuxuu rajeynayaa inuu wax badan ka beddelo kooxda isagoo kusoo kordhin doono wajiyo cusub si kor loogu qaado tayada iyo awooda kooxda halka ay Arsenal mar hore lasoo wareegtay Willian.